Hesekiel 32 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
32 Na afe a ɛto so dumien, ɔsram a ɛto so dumien no da a edi kan no, Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: 2 “Onipa ba, twa Egypt hene Farao ho kwadwom na ka kyerɛ no sɛ, ‘Wote sɛ amanaman mu gyata, nanso wɔama woayɛ dinn.+ “‘Na wote sɛ asuboa kɛse wɔ po mu,+ na wuhuruhuruw wɔ wo nsu mu de wo nan fono nsu no yɛ no fĩ.’ 3 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Mɛma aman pii asafo atrɛw m’atena+ mu agu wo so, na wɔde m’asau+ beyi wo. 4 Megyaw wo ato asase so na matow wo akyene wuram.+ Mɛma wim nnomaa nyinaa abesisi wo so na mama asase nyinaa so mmoa adi wo nam amee.+ 5 Mede wo nam bɛto mmepɔw so na mede wo funu ahyɛ abon mã.+ 6 Na mɛma asase anom wo ho nsu, wo mogya,+ wɔ mmepɔw so; na nea ɛsɔn fi wo mu no bɛhyɛ nsubon mã.’ 7 “‘Sɛ mema wudum a, mɛkata ɔsoro na mama ne nsoromma ayɛ tumm. Mede omununkum bɛkata owia so na ɔsram renhyerɛn+ bio. 8 Mɛma ɔsoro akanea nyinaa ayɛ tumm wɔ wo so na w’asase aduru sum,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 9 “‘Mehuru aman pii bo bere a mede wo man kɔ nkoasom mu wɔ amanaman mu, nsase a wunnim so no so.+ 10 Wo nti mɛma aman pii ho adwiriw wɔn,+ na wɔn ahene bɛbɔ hu bere a mihim me nkrante wɔ wɔn anim no,+ na da a wobɛhwe ase no wɔn ho bɛpopo bere nyinaa, wɔn mu biara kra nti.’+ 11 “Na nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Babilon hene nkrante bɛba wo so.+ 12 Na mɛma akatakyi, atirimɔdenfo a wɔhyɛ aman so nyinaa,+ de wɔn nkrante akunkum wo dɔm, na wɔbɛsɛe Egypt ahantan na wɔatɔre ne dɔm nyinaa ase.+ 13 Na mɛsɛe n’afieboa nyinaa afi nsu pii ho,+ na onipa nan remfono+ no bio, na afieboa mpo nan remfono no.’ 14 “‘Saa bere no, mɛma wɔn nsu ani atew, na wɔn nsubɔnten asen sɛ ngo,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 15 “‘Sɛ mema Egypt asase dan amamfõ na nea ama asase no so ayɛ mã nyinaa sɛe+ na mikunkum wɔn a wɔte so nyinaa a, wobehu sɛ mene Yehowa.+ 16 “‘Eyi ne kwadwom a nnipa betwa. Aman horow so mmea betwa; wobetwa Egypt ne ne dɔm nyinaa ho kwadwom,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.” 17 Na afe a ɛto so dumien, ɔsram no da a ɛto so dunum no, Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: 18 “Onipa ba, twa Egypt dɔm ho agyaadwo na ma wɔne aman akɛse so nnipa nsian nkɔ fam,+ asase ase tɔnn;+ ma wɔnka wɔn a wɔrekɔ amoa mu+ no ho. 19 “‘Hena na wo ho yɛ fɛ sen no?+ Sian kɔ fam kɔda momonotofo nkyɛn!’+ 20 “‘Wɔbɛtotɔ wɔn a nkrante akunkum wɔn no mfinimfini.+ Na wɔde no ama nkrante, enti montwe ɔne ne dɔm nyinaa nkɔ. 21 “‘Akatakyi no mu atitiriw befi Adamoa* mu akasa akyerɛ ɔne n’aboafo.+ Wobesian akɔ fam tɔnn+ akɔdeda hɔ te sɛ momonotofo a nkrante akunkum wɔn. 22 Ɛhɔ na Asiria ne n’asafo nyinaa wɔ.+ Wɔn adamoa* atwa ne ho ahyia. Wɔakunkum wɔn nyinaa, wɔatotɔ nkrante ano.+ 23 Na wɔabɔ n’ada wɔ amoa mu tɔnn,+ na n’asafo atwa n’adamoa ho ahyia. Wɔn nyinaa atotɔ nkrante ano, efisɛ wɔmaa ehu baa ateasefo asase so. 24 “‘Elam+ ne ne dɔm a wɔtotɔɔ nkrante ano no nyinaa atwa n’adamoa ho ahyia, na wɔkɔɔ asase ase tɔnn wɔ wɔn momonoto mu. Eyinom na wɔmaa ehu baa ateasefo asase so, na wɔne wɔn a wɔkɔ amoa mu no nyinaa anim begu ase.+ 25 Wɔde ne mpa asi atɔfo mfinimfini,+ na ɛwɔ ne dɔm mu. Na wɔn adamoa atwa ho ahyia. Wɔn nyinaa yɛ momonotofo a wɔtotɔɔ nkrante ano,+ efisɛ wɔmaa ehu baa ateasefo asase so; na wɔne wɔn a wɔkɔ amoa mu no nyinaa anim begu ase. Atɔfo mu na wɔde no toe. 26 “‘Ɛhɔ na Mesek+ ne Tubal+ ne ne dɔm nyinaa wɔ. Na wɔn adamoa atwa ne ho ahyia. Wɔn nyinaa yɛ momonotofo a wɔde nkrante ahwirew wɔn mu, efisɛ wɔama ehu aba ateasefo asase so. 27 So wɔrenna akatakyi no nkyɛn,+ momonotofo a wɔatotɔ a wɔde wɔn akode asian kɔ Adamoa mu tɔnn no mu? Wɔde wɔn nkrante bɛhyehyɛ wɔn ti ase na wɔn bɔne aba wɔn nnompe so,+ efisɛ wɔyɛ akatakyi a wɔmaa ehu baa ateasefo asase so.+ 28 Na wo de, wobebubu wo wɔ momonotofo mu, na wo ne wɔn a wɔtotɔɔ nkrante ano no akɔda. 29 “‘Ɛhɔ na Edom+ ne n’ahene ne n’abirɛmpɔn nyinaa wɔ. Na bere a wɔda so ara di tumi no wɔde wɔn kaa wɔn a nkrante akunkum wɔn+ no ho; na wɔbɛda momonotofo+ ne wɔn a wɔrekɔ amoa mu no nkyɛn. 30 “‘Ɛhɔ na atifi fam abirɛmpɔn ne Sidonfo+ nyinaa wɔ. Eyinom na wɔn ho hu ne wɔn tumi nyinaa akyi, wɔne atɔfo sian kɔ fam tɔnn wɔ aniwu mu no. Na wɔbɛda wɔn a nkrante akunkum wɔn no nkyɛn wɔ wɔn momonoto mu, na wɔde wɔn animguase bɛka wɔn a wɔrekɔ amoa mu no ho akɔ.+ 31 “‘Farao behu eyinom na ne werɛ akyekye, ne dɔm nyinaa nti.+ Na wɔde nkrante bekunkum Farao ne n’asraafodɔm nyinaa,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni. 32 “‘Ɔmaa ne ho hu baa ateasefo asase so,+ enti wɔde no bɛto momonotofo mfinimfini, wɔn a nkrante akunkum wɔn mu, Farao ne ne dɔm nyinaa,’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”
^ Nea ɛkyerɛ ankasa ne “N’adamoa.” Ebetumi akyerɛ Asiria hene no nkurɔfo adamoa.